मिर्गौला स्वस्थ्य राख्ने प्राकृतिक कुरा - A2Z Online Khabar A2Z Online Khabar
मिर्गौला स्वस्थ्य राख्ने प्राकृतिक कुरा
मिर्गौला शरीरको यस्तो फिल्टर हो, जसले रगतमा रहेको दुषित तत्व सफा गर्छ । मिर्गौंला स्वस्थ्य राख्न सकियो भने नै शरीर निरोगी हुने हो । मिर्गौंला कसरी स्वस्थ्य राख्ने त ? यसका केहि काइदा छन् । जस्तो कि, सक्रिय जीवनशैली, स्वस्थ्य खानपान, नियमित व्यायाम, पर्याप्त पानीको सेवन आदिले मृगौलालाई स्वस्थ्य राख्न सकिन्छ । त्यसबाहेक अर्को घरेलु विधी पनि छ, जसले प्रभावकारी रुपमा मिर्गौला सफा राख्ने काम गर्छ ।
मिर्गौला सफा गर्नका लागि धनिया राम्रो विकल्प हो । यो सजिलै र जहाँ पनि पाइन्छ । त्यो पनि सस्तो मूल्यमा ।
एक मुठ्ठी धनिया लिनुहोस् । त्यसलाई स-सना टुक्रा गर्नुहोस् । एक भाँडामा ९ लिटर पानी हालेर उक्त टुक्रा मिसाउनुहोस् । १० मिनेटसम्म त्यसलाई धिमा आँचमा पकाउनु पर्छ । अब यसलाई छानेर चिसो बनाउनुहोस् । यो पेयलाई हरेक विहान खाली पेटमा पिउनुहोस् । पिसाबको माध्यामबाट सबै दुषित तत्व बाहिर निस्कन्छ ।
यसमा थोरै ज्वानो हाल्नु भयो भने सुनमा सुगन्ध हुन्छ । यद्यपी यो उपाय स्वस्थ्य व्यक्तिले मात्र अपनाउन सक्छन् । मिर्गौला सम्बन्धी रोग लागिसकेका व्यक्तिले भने चिकित्सकको परामर्श लिनैपर्छ ।
मिर्गौला रोगीको डाइट चार्ट
मिर्गौंला रोगीले मसलेदार, तारेको, बेकरी आइटम, नरिवल पानी, कोल्ड ड्रिक सेवन गर्नु हुँदैन । साथै करेला, भिन्डी, बैगुन, पालक, मेथीको साग, मेवा, अंकुरित दाल, बेसन, पापड, अचार, बेकिङ पाउडर खान हुँदैन ।
किन हुन्छ मिर्गौला खराब ?
-अस्वस्थ्यकर जीवनशैली ।
-लामो समय पिसाब च्यापेर बस्नु । बिहान उठ्नसाथ पिसाब नफेर्नु ।
-नुनको अधिक सेवन ।
-उच्च रक्तचापको उपचारमा लापरवाही ।
-धेरै मात्रामा पेन किलर लिनु ।
जाडोमा गर्न नहुने ७ काम
अहिलेसम्म ५ वटा कोरोना भ्याक्सिन प्रयोग गर्न अनुमति